Matilda: nke anwansi dị na ọgụgụ | Akwụkwọ ugbu a
John Ortiz | | Ndị edemede, Akwụkwọ, Akwụkwọ ndị ntorobịa
Roald Dahl see okwu.
Matilda bụ akwụkwọ ọgụgụ ụmụaka nke ama ama Roald Dahl dere. E bipụtara nsụgharị mbụ ya na Anglo-Saxon na Ọktoba 1988 wee gosipụta ihe atụ nke Briton Quentin Blake. Ọ bụ Editorial Alfaguara gosipụtara nsụgharị ya n'asụsụ Spanish, ntụgharị ya bụ Pedro Barbadillo; ụdị a ka jigidere ọrụ Blake.
Matilda Ọ bụ otu n'ime akụkọ kacha eme nke onye ode akwụkwọ Britain; taa erela nde nde ọrụ a. Akwụkwọ akụkọ ahụ - n'agbanyeghị na ọ bụ akwụkwọ ụmụaka - meriri ọtụtụ ọgbọ, ekele niile maka okike na ịkọ akụkọ dị ebube nke onye dere ya. N'ihi mmetụta pụtara ìhè ya, na 1996, ewepụtara mmegharị ihe nkiri homonụ nke akwụkwọ akụkọ ahụ; Danny Devito duziri fim ahụ.
1 Nchịkọta Matilda
1.1 Bright obere
1.2 Ndị ezinụlọ ya ghọtahiere ya
1.3 Ọbá akwụkwọ na ọmụmụ ụlọ akwụkwọ
1.4 Onye nkuzi dị ụtọ vs onye isi ala
1.5 Mgbanwe nke ndụ
2 Data ndabere nke ọrụ
3.1 Matilda wormwood
3.1.1 Nna -ukwu Mmanụ a .ụ
3.2 Director Trunchbull
3.3 Maazi na Nwada Wormwood
3.4 Ihe odide ndị ọzọ
4 Banyere onye edemede, Roald Dahl
4.1 Ọrụ mbụ
4.2 Ọrụ edemede
4.4 Ụfọdụ ọrụ nke Roald Dahl
4.4.1 Akwụkwọ ụmụaka
4.4.2 Akụkọ ifo
Matilda bụ nwa agbọghọ dị afọ 5 nke ya na ndị mụrụ ya na nwanne ya nwoke bi n'otu obere obodo Bekee. Ọ Ọ bụ nwa agbọghọ na-enweghị atụ na onye nwere mmasị ịmata ihe, onye naanị afọ 3 mụrụ ka esi agụ ihe n'ụzọ nke onwe ya. Ebe ọ bụ na ọ chọpụtara eluigwe na ala nke akwụkwọ, ndụ ya gbanwere. N'oge dị mkpirikpi, ọ gụrụ ọtụtụ ndị ode akwụkwọ, bụ ndị gbasaa ihe ọmụma ya n'akụkụ dị iche iche.
Ndị ezinụlọ ya ghọtahiere ya
O di nwute, Ndị nne na nna Matilda ejighị talent ya kpọrọ iheHa weere ya dị ka ihe ọhụrụ ma na -akwa ya emo mgbe niile. Ha, dị ka ntaramahụhụ, ha manyere ya ile telivishọn ruo ọtụtụ awa, ha azụrụghị ya akwụkwọ ọhụrụ ha na -ahapụkwa ụlọ ya naanị ya n'ehihie ọ bụla. N'oge na -adịghị anya, Matilda chọpụtara na ọ mara ihe karịa nne na nna ya, yabụ na ọ malitere ileghara echiche ha anya banyere ihe dị mkpa n'ezie.
Ọbá akwụkwọ na ọmụmụ ụlọ akwụkwọ
Ebe ọ bụ na Matilda anọghị nne na nna ya ọtụtụ ụbọchị, O kpebiri ịga ọbaakwụkwọ kwa ụbọchị, ka o wee mezuo ọchịchọ ya ịmụ ihe. N'ebe ahụ ọ nwere obi anụrị nke ukwuu, n'ihi na ọ nwere ike ịgụ akwụkwọ n'enweghị nsogbu wee nweta ihe ọmụma ọhụrụ. Ihe niile o jikọtara na ọgụgụ ya na -enye ya ohere ịpụ iche na ndị ọgbọ ya nke ụlọ akwụkwọ.
Onye nkuzi dị ụtọ vs onye isi ala
Ikike Matilda nwere na ịgụ na mgbakọ na mwepụ ọ tụrụ ha n'anya onye nkuzi Mmanụ aeyụ, onye rịọrọ ka e bulie ya n'ọkwa. Ka o sina dị, nke ahụ abụghị onye nduzi Trunchbull nabatara nke ọma, na, n'iji ọnọdụ ya eme ihe, gọrọ arịrịọ ahụ. Omume a atụghị onye nkuzi n'anya, ebe ọ bụ na ajọ iwe nke "ikike" bụzị ama ọha; n’ezie, ọ bụ ihe a na -ahụkarị bụ nwanyị arụrụala ahụ ịkpọasị ụmụaka ma taa ha ahụhụ n’enweghị ihe kpatara ya.
Mgbanwe nke ndụ
Abatala nkata ahụ, Matilda chọpụtara na o nwere ụdị ike ọzọ: telekinesis (O nwere ike iji uche ya megharịa ihe). N'ịzụlite nka a, Mmanụ a wasụ kwadoro nke ukwuu. Agbanyeghị, nchọpụta nke '' Nnukwu ike '' ahụ mere ka Matilda nwee ike karịa ihe mgbochi abụọ buru ibu nke o nwetaworị: ihe mgbochi nke Nne na nna ya na mmegide na mkparị nke ajọ Trunchbull.
Data ndabere nke ọrụ
Ọ bụ akwụkwọ akụkọ nke ụdị akwụkwọ ụmụaka nke na -ekpughe ihe karịrị peeji 248 kewara 21 isiakwụkwọ dị mkpụmkpụ. Akụkọ ihe mere eme bụ onye na -akọ akụkọ maara ihe niile kwuru. Ejiri ederede dị mfe na -enye ederede ahụ nke na -enye ohere ịgụ nke ọma na ngwa ngwa.
Ọ bụ ya bụ isi akụkọ. Ọ bụ ihe nwata nwere ọmarịcha agwa, onye na -ahụ n'anya na ike karịrị nke mmadụ. Ndị mụrụ ya na -ajụ ya mgbe niile ma na -enye ya nsogbu. Ndụ nwata nwanyị a na -agbanwe mgbe ọ banyere ụlọ akwụkwọ elementrị, maka nkwado na ịhụnanya nke onye nkuzi ya na mmekọrịta ya na ndị enyi ọhụrụ ya na -ewulite.
Nna -ukwu Mmanụ a .ụ
Ọ bụ onye nkuzi ụlọ akwụkwọ praịmarị, na -ahụ n'anya ma raara onwe ya nye ụmụ akwụkwọ ya. Matilda bụ otu n'ime ndị obere nọ n'okpuru nlekọta ya. Site na nzukọ mbụ, ha abụọ na -enwe mmetụta ịhụnanya pụrụ iche. Mmekọrịta ha na -esiwanye ike ka oge na -aga, ruo n'ókè nke na Mmanụ a becomesụ na -aghọ onye bụ isi na ndụ onye protagonist.
Na mgbakwunye na ịbụ onye na -ahụ maka iduzi ụlọ akwụkwọ elementrị, ọ bụ onye na -emegide ọrụ ahụ. Omume ya dị njọ nke Master Honey. A kọwara ya n'ụzọ anụ ahụ nwanyị mara mma ma mara mma. N'etiti ụtọ arụ ha na -egosipụta ọ theụ nke ịta ụmụaka ntaramahụhụ siri ike na nke obi ọjọọ, dị ka igbachi ha ruo ọtụtụ awa n'ime ụlọ gbara ọchịchịrị.
Maazi na Nwada Wormwood
Ha bụ nne na nna mụrụ obere Matilda. Ha abụọ nwere agwa ọjọọ ma nwee IQ dị ala. Nne bụ onye na -agba chaa chaa na -enweghị ọrụ na elu elu. N'akụkụ nke ya, nna raara onwe ya nye azụmaahịa ụgbọ ala sitere na enyo enyo, nke na -eme ka ọ nọrọ na nsogbu iwu mgbe niile.
Ihe odide ndị ọzọ
Michael bụ nwanne nwanne Matilda, nwa okorobịa riri ikiri telivishọn na nne na nna ya gabigara ókè - ndị na -eji ya emechu nwata ahụ ihu. Na mgbakwunye, enwere ndị enyi Matilda, n'etiti nke Lavender pụtara, nwa agbọghọ nwere obi ike nke na -abụ ezigbo enyi nke onye na -eme ihe nkiri.
Banyere onye edemede, Roald Dahl
A mụrụ Roald Dahl na Septemba 13, 1916 na Cardiff, obodo dị na Llandaff, Wales. Ndị mụrụ ya bụ Sofie Magdalene Hesselberg na Harald Dahl, ha abụọ si Norway. Ọ gara akara ugo mmụta mbụ ya na The Cathedra School na St. Peter's School, mgbe ndị nke abụọ nọ n'ụlọ akwụkwọ Repton.
Mgbe ọ dị afọ iri na asatọ, ọ malitere ịrụ ọrụ na Royal Dutch Shell, ụlọ ọrụ mmanụ nke nyere ya ohere ibi ndụ okomoko. Na 1939, o sonyeere Royal Air Force, ebe ahụ ọ rụrụ ọzụzụ ụgbọ elu mbụ ya na ọnwa isii ka e mechara ekenye ya battalion 80 nke RAF. Na 1940, mgbe ị na -esi Egypt na -aga Libya, o nwere nnukwu ihe mberede nke kpuru ìsì ruo ọnwa abụọ.
Na 1942 malitere ọrụ ya dị ka onye edemede, sma ọ bụ ihe nkiri mbụ bụ egwuregwu Mfe dị mfe, nke e bipụtara n'akwụkwọ Saturday Saturday Post. Ọ bụ akụkọ dabere n'ihe mberede ụgbọelu ya. Mgbe ahụ, o gosipụtara egwuregwu ụmụaka mbụ ya: Ndị gremlins (1943). Ịmepụta akwụkwọ ụmụaka ndị a pụrụ iche wetaara ya nnukwu akwụkwọ ọgụgụ. N'ime ọrụ ya, ihe ịga nke ọma pụtara: Charlie na Chocolate Factory (1964), Ndị amoosu (1983) na Matilda (1988).
Dahl gbadara n'ụdị ndị okenye, na -eji akụkọ ọchị na njedebe na -atụghị anya ya. N'ime oge ọrụ ya, o dere ihe karịrị akụkọ iri isii nke ụdị a nke ebipụtara na akwụkwọ akụkọ dịka: Harper si, Playboy y Akwụkwọ akụkọ Ladies Home. Mgbe e mesịrị, a chịkọtara ndị a n'ime akụkọ ifo. Ọzọkwa, a na -emegharị akụkọ ụfọdụ maka ihe nkiri na telivishọn, dị ka: Ndị nwoke South y Akụkọ banyere ihe a na -atụghị anya ya.
N'ime afọ 60, o dere edemede maka sinima, otu n'ime ha bụ James Bond, Naanị ị na -ebi ugboro abụọ, mmegharị nke akwụkwọ akụkọ site na Ian Fleming. Na 1971, ọ gbanwere otu n'ime akwụkwọ ụmụ ya maka ihe nkiri ahụ Willy Wonka na ụlọ ọrụ chocolate.
Ka afọ na -aga, Dahl ghọrọ onye edemede ama ama. Ọ na -edozi akwụkwọ akụkọ, abụ, akụkọ na edemede n'ụzọ dị mfe. E mere ka nraranye ya pụta ìhè ọ bụghị naanị site n'ịrụ nnukwu ọrụ ya nke ọma, kamakwa site na ijikwa ree ihe karịrị nde 200 gburugburu ụwa.
Roald Dahl nwụrụ na Great Missenden na Nọvemba 23, 1990, mgbe ọ meriri n'ọrịa leukemia.
Ụfọdụ ọrụ nke Roald Dahl
Roald Dahl akwụkwọ.
Ndị gremlins (1943)
James na ndị ọzọ piich gigante (1961)
Charlie na Chocolate Factory (1964)
Aka anwansi (1966)
Super Fox (1970)
Charlie na nnukwu mbuli iko (1972)
Danny onye mmeri ụwa (1975)
El nnukwu agụ iyi (1978)
Ndị cretins (1980)
Ọmarịcha ọgwụ Jorge (1981)
Nnukwu ezigbo agwa mara mma (1982)
Ndi amoosu (1983)
Ahịhịa, mgbịrịgba na enwe (1985)
Ag Trot (1990)
Onye ụkọchukwu nke kwuru okwu azụ (1991)
Ndị mimpins (1991)
Nnukwu mgbanwe (1974)
Akụkọ kacha nkenke nke Roald Dahl (1978)
Jenesis na ọdachi (1980)
Akụkọ pụrụ iche (1977)
Akụkọ banyere ihe a na-atụghị anya ya (1979)
Ịbọ ọbọ bụ nke m SA (1980)
Akụkọ zuru ezu (2013)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Akwụkwọ ndị ntorobịa » Matilda
Julio Llamazares: akwụkwọ ndị o dere
Ụfọdụ akụkọ zuru oke, nke Domingo Villar dere. Nyochaa
Nabata akụkọ kachasị ọhụrụ banyere akwụkwọ dị na email gị